Bezisinceda kunye Unashamed Africa — UHAMBO LEE - SITE OFFICIAL
Kanye ngoku its 12:34 mna Botswana. Yinto mini yethu yokuqala ngokupheleleyo Afrika kunye neNkosi sele emsebenzini. Mbelele yalila yonke efika ngobusuku yokugqibela Rhawutini kwaye sibhabhe Botswana ngale ntsasa. Simelwe ukuhlangabezana iitoni ngabaxhasi le kwemini ngexesha ukutyikitywa senza kwi- venkile zamaKristu kwaye wayenazo udliwano kakhulu. ngokuhlwa ngomso lo ikonsathi wokuqala kukhenketho kwaye amped.
Ngokwenene sifuna olu tyelelo ukuba baqhame kwaye singathanda uncedo lwakho. Unokumnceda njani?
Kufuneka akuncede kwakhona kuthi ngomthandazo, ukuze abaninzi aya kubulela egameni lethu ukuze intsikelelo lula kuthi imithandazo ezininzi.
Sikholelwa ukuba uYehova usebenzisa imithandazo yabantu bakhe ukuba benze izicwangciso zakhe. Ngoko ke enokusinceda ngokuthandaza. Nazi ezinye iindlela ezisisiseko uyakwazi basithandazele kunye nathi:
1. Ukuba iNkosi sihlale sisempilweni kwaye womelele
2. Siwuyeke yokuma thina sizivakalisa ukuba singabakhonzi
3. Ukuba Ikonsathi iza kuhamba kakuhle
4. Ukuba iNkosi ukukhusela iintsapho zethu ngeli sikude
5. Ukuba uKristu ayephakanyiswa kuko konke esikwenzayo
Enkosi kwangethuba ukuze imithandazo yenu ifam. Sifuna kubo
david kamau • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:36 mna • impendulo
cant ulinde yall ukubetha Kenya on friday woooohooo!! prayn kuba ngokuqinisekileyo.
Eleanor Rigby • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:36 mna • impendulo
oh ukulunga kwam!! Ndingathanda ukufumana ubambo lwe guys!! im nje aqale ukwethula umculo wakho kwiprogram kunye abantwana Umthombo, Thekwini. Bangabantu kids street, kodwa bafana nje abantwana eqhelekileyo enethemba elahlekileyo. Kufuneka dude, badinga abayimizekelo. Bona abanothando kangaka ngomculo, oku konke Ndiyakuthanda ukwenza, ukudanisa ukucula kunye nokumamela umculo, Ungakhathazeki zonke ezinye izinto ndiyavuka, ngoncedo Umthombo xa. Umba kukuba kubonakala MTV ukuba abe yinto kuphela uyacula Pashto kwaye sijongana, I ngenene Ndingathanda ukuba aba bantwana ezwe uhlala!!!
email me ukuba une ixesha elithile kucwangciso lwakho!!
I nje Andikholelwa guys e SA kwaye ndabona kuphela ngoku!
Lesco101 • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:36 mna • impendulo
i HV wabona wat u guys benza,Ngokuqinisekileyo u amaKristu,UThixo uya multiple n kwandisa u.u ushiye simazi yaye ukuba aziwe
Maureenwabs • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:37 mna • impendulo
u nayo ngokwenene amazulu ezantsi Nairobi…i wachukunyiswa ngendlela u guys bacula kuphela malunga xtianity bt u kuphila it.i sithandaze iintsikelelo kaThixo n bethanda indlela ur.
agnes • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:37 mna • impendulo
Ngaba ekonsathini ngoLwesithathu e Gaborone Botswana. Intle into enkulu ukusebenza nonke. Wena faka us kakhulu. I AM unashamed. Ukukhangela phambili ekubeni guys emva apha. UThixo akusikelele wena ube nani nabanye tour Unashamed Africa. Kuza ukunithandazela.
Lchinjala • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:37 mna • impendulo
i uza EMALAWI YIBA AM eTshayina…… Guys ETSHAYINA ENEEMFUNO UTHIXO NAWE…..
JMG • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:38 mna • impendulo
Dope!!! Hlanganisa amazing, Uzuko Yiba Nkulunkulu!! P.S. Liphi Pro kule yokusebenza?
nathan"JabbaBoy" bajeziswe • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:38 mna • impendulo
elinde yall e Rhawutini… Im Qinisekisa u waphawula Tshirt sadying “IMPRAYINGFORYOU”
uSvetlana • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:38 mna • impendulo
Ndikhungile ngawe kunye cant bemlalele, befuna ukuva ukuba waphuma ngayo!!!!! Yiba ekhuselekileyo ndiya kukugcina emithandazweni yam!!! Trip Lee xa u comming emva Charlotte kwakhona ndiyakukhumbula amaqashiso!!!!
Joe-fa • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:38 mna • impendulo
LeNkosi uYesu ziphilile, zinamandla,babheke phezu iintsapho zabo ngoxa kude,sebenzisa ukuba lizukise igama lakho oNgcwele,akabandulula iikonsathi hamba kakuhle uze uzaliswe ebusweni bakho yaye igama lakho iphakame everything.Amen ngasentla
Roxanne • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:39 mna • impendulo
Kakhulu nakanjani! Bona nani Kapa nomlenze ikonsathi :)
kaLiam • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:39 mna • impendulo
Ndathandaza imithandazo ezicetyiswayo. Nangona umthandazo olula, Ndiyazi ukuba Yena bayivileyo!
Wanga uYesu akubusise, intuthuzelo kwaye akunike amandla akhe, amandla kunye nokuqonda.
Kenya Seven • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:39 mna • impendulo
ukuthandaza! kakhulu Ngokuqinisekileyo!
Tylerbrabham • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:40 mna • impendulo
Ndikhungile ngawe guys. Inkosi ikusikelele.
lilcj • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:40 mna • impendulo
kukho nkosi kuye okulungileyo kum kakhulu kodwa ngoku i nje ndifuna ukubonisa italente yam ebantwini, Zazi ungubani uYesu
Rshidel • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:40 mna • impendulo
Umthandazo akuthethi ukuxhobisa wena ukuba imisebenzi emikhulu.
Umthandazo lo msebenzi mkhulu. —- Oswald Chambers
QuintonTodd • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:41 mna • impendulo
Nina bazalwana got imithandazo yethu!!
Star Carmona • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:41 mna • impendulo
kwenziwe! I cela iNkosi ukuyigcina kuwe, elubabalweni wakhe olungileyo!!!
rebecca • EyeThupha 19, 2013 ngexesha 7:41 mna • impendulo
Enkosi kakhulu ukwenzela ukubeka le phandle.
Ndisoloko efuna ukwazi ukuba I uthandazela yall.